I-MC4 Branch Isixhumi Abahlinzeki Nefektri - China MC4 Branch Isixhumi Abakhiqizi
Isixhumi segatsha iTriple MC4 T (1 Set = 3Male 1Female + 3Female 1Male) izixhumi zezixhumi zeMC4 zamakhemikhali elanga. Lezi zixhumi ze3T zegatsha zivame ukusetshenziselwa ukuxhumanisa izintambo ezintathu zamapaneli elanga nokuxhuma okufanayo, okulingana ne-MC4 Female Male single Connector kusuka kumamojula we-PV. Isixhumi segatsha se-1in 1out singangena kuwo wonke amaphaneli elanga we-MC4 Type Photonic Universe.I-100% engenamanzi (IP67), ngakho-ke ingasetshenziswa ngaphandle kunoma yisiphi isimo sezulu.
6 kuya ku-1 MC4 Splitter Ixhuma ama-Solar Panels ngokufana
I-6 kuye ku-1 MC4 Splitter Ixhuma ama-Solar Panels ngokufana (1 Set = 6Male 1Female + 6Female 1Male) iyizixhumi zezixhumi zekhebula ze-MC4 zamapaneli elanga. Lezi zixhumi zelanga ezi-6T zivamise ukusetshenziselwa ukuxhumanisa izintambo zamapaneli elanga ayi-6 nokuxhuma okufanayo, okulingana ne-MC4 Female Male Isixhumi esisodwa esivela kuma-PV Module, .Lesi sixhumi segatsha singangena kuwo wonke ama-panels we-MC4 Type Photonic Universe. Yi-IP67 eyi-100% engenamanzi IP67, ngakho-ke zingasetshenziswa ngaphandle kunoma yiziphi izimo zezulu.
Isixhumi esi-5 koku-1 se-Multi Contact Branch Isixhumi Sezintambo Zokunweba
Isixhumi segatsha lePenta MC4 T (1 Set = 5Male1 Female + 5Female 1Male) yizixhumi zezixhumi zekhebula zeMC4 zamapaneli elanga Lezi zixhumi ze-5T zelanga zivame ukusetshenziselwa ukuxhumanisa izintambo zamapaneli elanga ayi-5 nokuxhuma okufanayo, okulingana ne-MC4 Female Male Isixhumi esisodwa kusuka Amamojula we-PV, .Lesi sixhumi segatsha se-5T singangena kuwo wonke ama-panels we-MC4 Type Photonic Universe. Yi-IP67 eyi-100% engenamanzi, ngakho-ke ingasetshenziswa ngaphandle kunoma yisiphi isimo sezulu.
I-Solar Panel Cable Splitter 1 kuya ku-4 T Izixhumi Zamagatsha
Isixhumi segatsha le-MC4 T lesine (1 Set = 4Male1 Female + 4Female 1Male) yizixhumi zezixhumi zekhebula ze-MC4 zamapaneli elanga Lezi zixhumi zivame ukusetshenziselwa ukuxhumanisa intambo yamapaneli elanga ayi-4 nokuxhuma okufanayo, okulingana ne-MC4 Female Male Isixhumi esisodwa esivela kumaModyuli we-PV , Lesi sixhumi segatsha se-4T singangena kuwo wonke ama-panels we-MC4 Type Photonic Universe. Yi-IP67 eyi-100% engenamanzi, ngakho-ke ingasetshenziswa ngaphandle kunoma yiziphi izimo zezulu.